Ny fahefatra sy ny faritra farany izay manantena mpikaroka mba miady dia handray fanapahan-kevitra manoloana ny fisalasalana. Izany hoe, araka izay rehetra philosophizing sy ny fandanjalanjana, fikarohana ny fitsipi-pitondrantena dia midika mandray fanapahan-kevitra mikasika ny zavatra tokony hatao ary inona no tsy tokony hatao. Indrisy anefa, ireo fanapahan-kevitra dia tsy maintsy atao matetika miorina amin'ny fanazavana tsy feno. Ohatra, rehefa nanaovany encore, mpikaroka mety maniry ny hahafantatra ny mety fa izany dia hahatonga ny olona iray ho nitsidika ny polisy. Na, rehefa nanaovany-pihetseham-po mpikaroka areti-mifindra rehetra maniry hahafantatra ny mety fa mety hiteraka fahaketrahana amin'ny mpandray anjara sasany. Ireo probabilities dia angamba tena ambany dia ambany, fa izy ireo tsy fantatra eo anoloan'ny fikarohana atao. Ary, satria tsy tetikasa ampahibemaso fanarahan'ny vaovao momba ny voka zava-nitranga, ireo probabilities tsy fantatra amin'ny ankapobeny na dia taorian'ny tetikasa dia vita.
Ahiahy tsy miavaka amin'ny fiaraha-monina fikarohana ao amin'ny taona nomerika. Ny Belmont Report, rehefa nilaza ny paika fanombanana ny loza sy ny tombontsoa, ​​mazava manaiky izany dia ho sarotra ho refesina tena. Ireo fanahiana, na izany aza, dia mafy kokoa ao amin'ny taona nomerika, amin'ny ampahany satria tsy manana traikefa, ary amin'ny ampahany noho ny toetra mampiavaka ny fiaraha-monina dizitaly taona fikarohana.
Noho ireo fanahiana ny olona sasany toa ny miaro ny zavatra toy ny hoe "tsara kokoa misoroka toy izay mitsabo," izay ny mahazatra dikan-tenin'ny Fitsipika fitandremana. Raha io fomba toa mitombina angamba hendry mihitsy aza-dia mety tena hiteraka voka-dratsy; dia bolo ny fikarohana; ary izany no mahatonga ny olona mihevitra amin'ny fomba diso (Sunstein 2005) . Mba hahatakatra ny olana amin'ny fitandremana Fitsipika, dia aoka ny handinika-pihetseham-po areti-mifindra. Ny fanandramana dia nikasa anjara tokony ho olona 700,000, ary nisy tokoa ny sasany mby amin'izay ao amin'ny fanandramana ny olona hijaly ratsy. Kanefa, nisy koa ny sasany ny fanandramana vintana mety hilefitra fahalalana izay hahasoa ny mpampiasa Facebook sy ny fiaraha-monina. Noho izany, raha mamela ny fanandramana dia mety (araka ny efa amply noresahana), manakana ny fanandramana ihany koa ny mety ny fanandramana satria afaka namokatra sarobidy ny fahalalana. Mazava ho azy, ny safidy dia tsy eo manao ny fanandramana tahaka ny nitranga ary tsy manao ny fanandramana; maro ireo azo atao ny fanovana ny endrika izay mety ho nitondra azy ho any amin'ny hafa etika mandanjalanja. Na izany aza, amin'ny fotoana iray, ny mpikaroka dia hanana ny safidy eo amin'ny fanaovana ny fandinihana ary tsy manao ny fianarana, ary misy ny loza mety hitranga ao na asa sy ny tsy firaikan'ny. Tena tsy mendrika ny hifantoka afa-tsy amin'ny mety ny asa. Tena fotsiny, tsy misy mety-manatona.
Mifindra any an-dafin'ny Fitsipika fitandremana, fomba iray manan-danja mba hieritreritra momba ny fanapahan-kevitra omena dia ny tsy fahazoana antoka firy ​​mety Standard. Ny firy ​​mety faneva miezaka benchmark ny mety ny iray fianarana manokana manohitra ny loza izay miezaka mpandray anjara eo amin'ny fiainany andavanandro, toy ny manao fanatanjahan-tena sy ny fiara fiara (Wendler et al. 2005) . Izany fomba fanombanana dia sarobidy, satria zara raha misy zavatra tsy mety dia mora kokoa noho ny fanombanana ny tena fari-doza. Ohatra, fihetseham-po areti-mifindra, raha tsy mbola nanomboka ny fikarohana, ny mpikaroka afaka oharina ny fihetseham-po voajanahary nitranga afa-po amin'ny News NAMPIHINANA SAKAFO ny fihetseham-po afa-po izay mpandray anjara hahita ao amin'ny fanandramana (Meyer 2015) . Raha ny News Feeds ambanin'ny fitsaboana dia mitovy izay mazava ho hitranga amin'ny Facebook, dia mety hanatsoaka hevitra ny mpikaroka fa ny fanandramana dia kely dia kely mety. Ary, dia afaka manao fanapahan-kevitra io na dia tsy mahalala ny tena fari-doza. Toy izany koa fomba azo ampiharina any encore. Voalohany, encore Niteraka fangatahana ny tranonkala izay fantatra ho mora, toy ny tranonkala ny vondrona ara-politika voarara ao amin'ny firenena miaraka amin'ny famoretana governemanta. Araka izany, dia tsy mety ho an'ny mpandray anjara zara any amin'ny firenena sasany. Na izany aza, ny nohavaozina dikan-encore-izay ihany no Niteraka fangatahana ny Twitter, Facebook, sy YouTube-dia kely dia kely fangatahana, satria fangatahana ho an 'ireo toerana ireo mandritra ny ara-dalàna niteraka tranonkala Browsing (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Ny zava-dehibe faharoa hevitra dia rehefa mandray fanapahan-kevitra momba ny fampianarana amin'ny hery tsy fantatra mety dia fanadihadiana, izay mamela ny mpikaroka mba manao kajy mety tsara ny habeny noho ny fianarana (Cohen 1988) . Izany hoe, raha ny fianarana mety hampiharihary mpandray anjara mba vy very, na dia mety zara-dia ny fitsipiky ny Beneficence toa manondro fa te-hametraka ny kely indrindra habetsaky ny mety ilaina mba hanatratrarana ny fikarohana tanjona. (Eritrereto indray ny Ahena fitsipika izay noresahina tao amin'ny Toko 4.) Na dia ny mpikaroka sasany manana mieritreritra be momba ny fanaovana ny fianarany araka izay lehibe araka izay azo atao, fikarohana ny fitsipi-pitondrantena dia toa manondro fa tokony hahatonga ny fianarana ho kely araka izay azo atao. Noho izany, na dia tsy fantatrao ny tena haavon'ny mety tafiditra ny fianarana, ny hery fanadihadiana dia afaka manampy anao antoka fa dia toy ny kely araka izay azo atao. Power famakafakana Tsy zava-baovao, mazava ho azy, fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fomba fa nampiasaina tao amin'ny Analog taona sy ny fomba tokony ampiasaina ankehitriny. Ao amin'ny Analog taona, ny mpikaroka amin'ny ankapobeny no fahefana fanadihadiana mba hahazoana antoka fa ny fianarana dia tsy kely loatra (izany hoe, eo ambanin'ny-Powered). Ankehitriny, na izany aza, dia tokony hanao fahefana mpikaroka fanadihadiana mba hahazoana antoka fa ny fianarana dia tsy lehibe loatra (izany hoe, ny-Powered). Raha manao fanadihadiana ny hery sy ny fianarana Toa mitaky goavana maro ny olona, ​​dia mety ho famantarana fa ny vokany izay halalininao dia bitika. Raha izany no izy, dia tokony hanontany raha kely io vokany dia ampy zava-dehibe ny hametraka ny olona maro be ny loza mety hitranga ny tsy fantatra habeny. Amin'ny toe-javatra maro ny valiny angamba no tsy misy (Prentice and Miller 1992) .
Ny firy fitsipika sy hery mety hanampy anao hieritreritra famakafakana momba ny fampianarana sy ny famolavolana, nefa tsy manome anareo misy vaovao fanampiny momba ny fomba mety hahatsapa mpandray anjara momba ny fianarana, ary inona no mahazaka mba miaina amin'ny fandraisana anjara ao amin'ny fandalinanao. Fomba iray hafa mba hiatrehana ny tsy fahazoana antoka dia ny hanangona fampahalalana fanampiny, izay mitondra any amin'ny etika-valiny Nikarakara fanadihadiana sy fitsapana.
Taorian'ny fanontaniana tsirairay, namaly dia nanome toerana izay izy ireo dia afaka manazava ny valiny. Farany, namaly-izay mety ho mety ho mpandray anjara na ny olona nanakarama avy amin'ny asa madinika asa tsena (ohatra, Amazon Mechanical Turk) -answer isan'ny mponina sasany fanontaniana fototra (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .
Etika-valiny fanadihadiana manana lafin-javatra roa izay hitako tena tsara tarehy. Voalohany, dia hitranga eo anatrehan'ny fianarana efa natao, ka noho izany dia afaka misakana ny olana eo anoloan'ny fikarohana manomboka (izay mifanohitra amin'ny fomba izay hanaraha-maso ny hiharan'ny fanehoan-kevitra). Faharoa, etika-valinteny fanadihadiana hahafahan'ny mpikaroka mba hampidi dika maro ny tetikasa fikarohana mba hijery ny nahalala etika mandanjalanja ny samy hafa dikan 'ny izany tetikasa. Famerana iray, na izany aza, ny etika-valinteny fanadihadiana dia fa tsy mazava ny fomba manapa-kevitra eo amin'ny samy hafa nomena fikarohana teti-dratsy vokatry ny fanadihadiana. Amin'ny toe-javatra ny tafahoatra tsy fahazoana antoka karazana fampahalalana ity dia mety hanampy ny mpitari-dalana mpikaroka 'fanapahan-kevitra; Raha ny marina, Schechter and Bravo-Lillo (2014) tatitra miala amin'ny fianarana nomanina ho setrin'ny olana nitaiza ny mpandray anjara amin'ny etika-valinteny fanadihadiana.
Raha fanadihadiana etika-valinteny mety ho fanehoan-kevitra hanampy ny fanombanana ny tolo-kevitra fikarohana, izy ireo dia tsy afaka mandrefy ny mety na hiharan'ny hamafin'ny zava-nitranga. Ny fomba iray izay mpikaroka ara-pitsaboana hiatrehana ny fisalasalana eo amin'ny toe-javatra mampidi-doza no nikarakara fitsapana, ny fomba izay mety hanampy amin'ny fikarohana momba ny fiaraha-monina sasany.
Rehefa mizaha toetra ny fahombiazan'ny vaovao zava-mahadomelina, ny mpikaroka dia tsy avy hatrany maika ho lehibe randomized pitsaboana fitsarana. Kosa, dia mihazakazaka karazana fianarana roa voalohany. Voalohany, ao amin'ny Dingana I fitsarana, mpikaroka dia tena mifantoka amin'ny fitadiavana azo antoka levitra, ary tafiditra amin'izany ny fanadihadiana ireo vitsy ny olona. Raha vao azo antoka levitra no hita, Dingana II fitsapana hanombana ny fahombiazan'ny ny zava-mahadomelina, fa afaka miasa amin'ny toe-javatra tsara indrindra-raharaha (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . Rehefa avy Dingana I sy II fanadihadiana dia fanafody vaovao avela ho nandinika ao lehibe maso randomized fitsarana. Raha ny tena rafitry ny fitsarana nikarakara ampiasaina ao amin'ny fampandrosoana ny vaovao dia mety tsy ho fanafody tsara ho an'ny fiaraha-monina mendrika fikarohana, rehefa tojo fisalasalana, mpikaroka afaka hihazakazaka kely kokoa mazava fianarana natao hanombanana fiarovana sy mandaitra. Ohatra, miaraka encore, afaka an-tsaina ny mpikaroka manomboka amin'ny mpandray anjara ao amin'ny firenena amin'ny fitondrana mafy-ny-lalàna.
Miara-efatra ireo fomba-ny kely dia kely mety Standard, fahefana famakafakana, etika-valiny fanadihadiana, ary Nikarakara fitsapana, dia afaka manampy anao mivoaka amin'ny fomba manan-tsaina, na dia teo aza ny fisalasalana. Tsy fahazoana antoka tsy voatery hitarika ho amin'ny tsy firaikan'ny.